Web Admin	2019-08-23 10:33:45
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများ နှင့်အတူ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း သဘာဝဘေးဒဏ်ခံပြည်သူများအတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် စေတနာအလှူရှင်များမှ စုပေါင်း...
Web Admin	2019-08-21 11:07:21
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် ဟိန္ဒူရိုးရာ မေတ္တာနှောင်ကြိုး ချည်နှောင်ခြင်းအခမ်းအနားကို သြဂုတ်လ ၁၉ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ ရှေးဦးစွာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီး အမျိုးသမီးကော်မတီနာယက ဒေါက်တာယုယုမေက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် “လူမျိုးမတူ၊ ဘာသာခြားသော်လည်း လူသားများ၏စိတ်သည်တူညီကြောင်း၊ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကာ လူသားအချင်းချင်း မေတ္တာစေတနာထား၍ တစ်ဦးလဲလျှင်တစ်ဦးက ဝိုင်းဝန်းကူညီကာ...
Web Admin	2019-08-21 11:03:42
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုများကြောင့် သဘာဝဘေးသင့်ခဲ့သည့် ရေဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများက စေတနာသဒ္ဒါတရားထက်သန်စွာဖြင့် အလှူငွေများထောက်ပံ့လှူဒါန်းလျှက်ရှိရာ သြဂုတ် ၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ထံသို့ လာရောက်လှူဒါန်းကြသည်။ ရေဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်လှူဒါန်းကြရာတွင်...
Web Admin	2019-08-20 11:52:09
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် သုခရိပ်မြုံ(မန္တလေး) လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသည် HIVရောဂါကူးစက်ခံ မိဘမဲ့ကလေးငယ်များအား စနစ်တကျပြုစုစောင့်ရှောက်ကာ မိသားစုသဏ္ဍာန် နေထိုင်ကြှီးပြင်းစေပြီး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတို့အတွက် တစ်သက်တာစီမံချက်များ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ကာ...
Web Admin	2019-08-20 11:48:06
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် သဘာဝဘေးသင့်ခဲ့သည့် ရေဘေးရှောင်ပြည်သူလူထုများအတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှ စေတနာရှင်အဖွဲ့အစည်းခြောက်ခုက ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂ဝ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် ပြုလုပ်သည်။ အဆိုပါလှူဒါန်းပွဲတွင်...